राष्ट्रिय जनमोर्चामा २ सांसदको विद्रोह, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै बन्ने ! | SAMAJBAD
राष्ट्रिय जनमोर्चामा २ सांसदको विद्रोह, मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै बन्ने !
पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनमध्ये दुई सांसदले पार्टीको निर्णयलाई नै चुनौती दिँदै विद्रोह गरेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयास विफल भएको छ । प्रदेशसभाको अंक गणितमा बहुमत जुटाउनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत निर्णायक हुन्छ । एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन होस् वा एमाले बाहेकका दल मिलेर सरकार बनाउन होस्, आवश्यक बहुमतको आँकडा पार गर्नका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन अनिवार्य देखिन्छ ।
जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने अडान लिएका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची रहेकै दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएका थिए । सोही दिन साँझ उनी अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा फेला परेका थिए । प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा नयाँ सरकार गठनका लागि तोकेको तीन दिनको समयसीमा बुधबार ४ बजे सकिँदैछ । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सफलता नपाएको अवस्थामा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुला हुने छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा नयाँ सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा काँग्रेसका १५, माओवादीका ११ (सभामुख बाहेक) र जनता समाजवादी पार्टीका २ गरी २८ सांसदमात्र छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनमध्ये एक सांसदले खुलेरै काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन जनाउँदै आए पनि अन्य दुई सांसदले पार्टीको निर्णय र ह्विपसमेत उल्लंघन गर्ने अडान राख्दै आएका कारण उक्त गठबन्धनमा जम्मा २९ सांसदमात्र पुग्ने देखिएको हो । यता एमालेसँग पनि आफ्ना २७ सांसद र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे गरी जम्मा २८ मत छ । ठुलो दलका हैसियतमा एमालेले पुनः सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भए पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसैले एमालेले बनाउने नयाँ सरकारले पनि स्थायित्व पाउनेमा भने शंका नै छ ।
Previous articleनिषेधाज्ञामा बस व्यवसायीहरुको मालामाल, तेब्बर भाडा असुलेर काठमाडौंबाट निर्वाध यात्रु ओसारपसार
Next articleदेउवालाई झट्का, डा. बाबुराम भट्टराईको बोली फेरियो